Filme Flix TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu] - Luso Gamer
Mazuva ese mafambiro uye kutsvaga kwevaraidzo maapplication ari kuwedzera zvakanyanya. Kunyangwe mazhinji emapuratifomu anowanikwa online ari ekutanga. Naizvozvo tichitarisa mahara uye nyore kuwanikwa pano tinopa Filme Flix TV.
Pano application yatiri kupa yevashandisi veandroid ndeyemahara uye haidi kunyoreswa. Uyezve kuisa iyo application mukati meandroid smartphone inobvumira vataridzi. Kuona asingaperi Mabhaisikopo uye Series mahara.
Kunze kwekupa mavhidhiyo mumhando yeHD, iyo Vadivelu Comedy Movie App zvakare inotsigira mamwe ma premium maficha. Pano isu tichakurukura iwo ma pro maficha muchidimbu nhanho nhanho. Saka iwe uri kutsvaga yepamhepo yemahara yevaraidzo chikuva wobva waisa yakapihwa Apk.
Chii chinonzi Filme Flix TV Apk
Filme Flix TV Android ipuratifomu yakanaka yepamhepo uko vashandisi veandroid vanogona kunakidzwa nekusingaperi Mafirimu uye Series. Zvemahara pasina kunyoreswa kana kunyoreswa. Zvese zvavanoda kuita kungowana iyo Apk uye unakirwe neprimiyamu yemukati.
Kune akawanda emamwe mapuratifomu anozivikanwa epamhepo anowanikwa. Izvo zvakakurumbira uye zviri kuitika pakati pevashandisi veandroid. Nekudaro kana zvasvika pakuwana kwakananga kune varaidzo zvemukati. Ipapo izvo zvinoda premium kunyoreswa.
Kunyoreswa kwepremium kunogona kuita mazana emadhora. Izvo hazvibvumirwe zvachose kune avhareji vashandisi venhare. Zvakare, ruzhinji rwevashandisi veandroid vanotsvaga online emahara mapuratifomu. Izvo hazvidi kunyoreswa uye kuwana mahara kumavhidhiyo.
Naizvozvo kutarisa chikumbiro chemuoni uye kuda. Vagadziri vakazounza Filme Flix iyo yemahara kurodha uye haidi kunyoreswa. Ingoisa iyo yakataurwa application unakirwe isingaperi premium zvemukati zvemahara.
zita Firimu Flix TV
zera 13.6 MB
Package Zita com.megaseries.livetvseries
Patinoongorora iyo inosvikika chikuva muchidimbu takabva tawana akawanda akasiyana akakosha maficha. Izvi zvinosanganisira Zvikamu Zvakapfuma, Sefa Yekutsvagisa Yetsika, Push Notification Chiyeuchidzo, Kuseta Dashboard, Inbuilt Vhidhiyo Inoridza uye nezvimwe.
Yakanyanya yekuwedzera iyo vashandisi veandroid vanozoda nezve application ndeye kukurumidza maseva. Vazhinji vevaoni vepamhepo vanodzivirira kuisa akadaro wechitatu bato anotsigirwa maapuro. Nekuda kwekunonoka kupa kwemapaketi edata kusanganisira mavhidhiyo.
Kunyangwe ruzhinji rwevaoni vachiona iyi inononoka yekubatanidza internet. Mumamiriro ezvinhu akadaro, pavanenge vachisangana nedambudziko guru iri. Zvinoita sezvisingabviri kuti vaoni ivavo vafarire kutenderera kwakatsetseka pamusoro pekubatanidza kunononoka.
Kunyangwe avo vashandisi veandroid vakawana yakanyanya-kumhanya internet yekubatanidza vanogona kusangana nedambudziko rimwe chete. Saka kune rimwe dambudziko, vanogadzira vanodyara aya anokurumidza maseva. Rangarira maseva anopindura anozozvigadzirisa otomatiki iyo data inopa.
Imwe pfungwa yatinokanganwa kuwedzera ndeyekuti application inotsigira zvizere mutauro wechiPutukezi. Nekudaro, vashandisi vanogona kushandura zviri nyore mutauro mukuru kuseta dashboard. Saka iwe unoda maficha epro uye wakagadzirira kunakidzwa nepremium Mamuvi uye Series wobva waisa Filme Flix TV Dhawunirodha.
Kuisa iyo app kunopa asingaperi premium mavhidhiyo.
Zviratidziro zveTV zvakare chikamu chepuratifomu.
Hapana yakananga IPTV sarudzo inowanikwa.
Mavhidhiyo akagoverwa muzvikamu zvakasiyana.
Maitiro ekurodha Filme Flix TV App
Kunyangwe isu tisingakwanise kupupurira faira rekushandisa paPlay Store. Zvinoreva kuti vashandisi veAndroid havakwanise kurodha Apk kubva Play Store. Kunze uko akawanda echitatu mapato anotsigirwa mawebhusaiti anoti anopa akafanana maApk mafaera emahara.
Asi muchokwadi, iwo mawebhusaiti ari kupa emanyepo uye enhema mafaera. Saka mumamiriro ezvinhu akadai, tinokurudzira avo vashandisi veAndroid kushanyira webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu isu tinongotsigira mafaera echokwadi. Kuti utore faira rekushandisa ndapota tinya pane yakapihwa link.
Iyo yekuvaraidza application yatiri kupa pano ndeye yepakutanga. Tisati taipa mukati mechikamu chekurodha, isu takatoiisa pamusoro pemafoni akasiyana. Saka isu hatigone kupupurira chero dambudziko rakananga mukati.
Kusvika ikozvino isu takatogovana akawanda emamwe evaraidzo maapplication. Izvo zvine hukama neakapihwa application faira. Kuti uongorore izvo zvinosvikika maapplication ndapota tevera zvinongedzo. Ndivo HDToday.TV Apk uye Sratim TV Apk.
Pamwe uri wePortugal kana imwe dunhu. Kana iwe uchida kuona varaidzo Mamuvhi uye Series asi usingakwanise kuwana online echokwadi sosi. Zvadaro mumamiriro ezvinhu akadai, isu tinokurudzira avo vashandisi ve-android kuisa Filme Flix TV Apk.
Categories Entertainment, Apps Tags Firimu Flix TV, Firimu Flix TV Apk, Firimu Flix TV App, Firimu Flix TV Download, Vadivelu Comedy Movie App Post navigation